App Arenti - Arenti & Laxihub
Ahoana ny fampidinana ny app Arenti?
1. Tsindrio ny bokotra eto ambany raha te hiditra ny Arenti Download Center ary misintona ny fampiharana Arenti amin'ny fitaovanao finday.
2. Azonao atao ny misintona ny rindranasa Arenti ho an'ny telefaoninao iPhone na Android amin'ny alàlan'ny fikarohana ny teny fototra "Arenti" ao amin'ny App Store na Google Play na ny fizahana ny kaody QR etsy ambany.
Ahoana ny fomba hampifandraisana an'i Alexa amin'ny Arenti?
1. Amboary ny tambajotra amin'ny Arenti App
Amboary ny fakan-tsary Arenti na Laxihub ary fenoy ny fikirakirana tambajotra araka ny bitsika ao amin'ny Arenti App
Fanamarihana: Miezaha manome anarana ny fakantsarinao amin'ny App Arenti amin'ny teny mora fantatra toy ny "Front Door Camera", ary aza mampiasa tarehintsoratra manokana; Azonao atao ny manondro ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa ny efijery Alexa fitaovana na ny pejin-tranonkala mifandraika amin'izany amin'ny lisitry ny fiteny tohanana.
2. Atsangano ny efijery Alexa device
(Raha efa namboarinao ny fitaovanao Alexa screen toy ny Amazon Echo Show na Amazon Echo Spot, dia azonao atao ny mandingana ity dingana ity. Ireto torolalana manaraka ireto dia miorina amin'ny Amazon Alexa iOS App)
1. Atsofohy ao anaty fivoahan'ny herinaratra ny fitaovana Alexa screen.
2. Safidio ny fiteny eo amin'ny efijen'ilay fitaovana, ampifandraiso amin'ny tambajotra Wi-Fi ny fitaovanao, midira ao amin'ny kaontinao Amazon, ary fenoy ny fikirakirana arakaraka ny bitsika ao amin'ny Amazon Alexa App.
3. Sokafy amin'ny telefaona findainao ny App Amazon Alexa. Midira ao amin'ny kaontinao Amazon, avy eo kitiho ny Fitaovana eo amin'ny bara fitetezana farany ambany, safidio ny GROUP (oh: Efitra fandraisam-bahiny) izay nanampianao ilay fitaovana, ary ho hitanao ny fitaovana Alexa efijeryo amin'ity GROUP ity.
Ahoana ny fampifandraisana ny Google Assistant amin'ny Arenti?
Fanamarihana:Miezaha manome anarana ny fakantsarinao amin'ny App Arenti amin'ny teny mora fantatra toy ny "Front Door Camera", ary aza mampiasa tarehintsoratra manokana; azonao atao ny manondro ny boky torolàlana ho an'ny mpandahateny tafiditra ao amin'ny Google Assistant na ny pejin-tranonkala mifandraika amin'izany amin'ny lisitry ny fiteny tohanana.
2. Amboary ny fitaovana Google Home
(Raha efa namboarinao ny fitaovana ampidirina Google Assistant toy ny mpandahateny Google Home na Google Nest Hub, dia azonao atao ny miala amin'io dingana io. Ireto torolalana manaraka ireto dia miorina amin'ny Google Home iOS App)
1. Hamarino tsara fa mandeha sy mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny fitaovanao Google Assistant.
2. Sokafy ny Google Home App amin'ny findainao, kitiho ny fanombohana eo ankavanan'ny farany ary miditra amin'ny kaonty Google anao, avy eo paompy "Manomboha" eo afovoan'ny efijery findainao.
Ny telefaona tsy afaka mahazo ny hafatra fanindriana fanairana?
Mila mamela ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fampiharana "Arenti" ianao handraisana hafatra fanao mahazatra. Rehefa misintona ilay rindrambaiko ianao ary miditra amin'ny fotoana voalohany, dia misy varavarankely pop-up hanosika anao hamela ilay fahazoan-dàlana. Raha misafidy ny hamono azy ianao dia mila miditra ny rafitry ny rafitry ny telefaona-fampandrenesana-mahita "Arenti" ary ahafahanao mahazo alalana fampandrenesana.
Tsy mahazo fampandrenesana amin'ny findaiko?
Azafady mba hamafiso fa ny App dia mandeha amin'ny telefaona, ary nosokafana ny fampahatsiahivana mifandraika amin'izany; nisokatra ny fampandrenesana hafatra sy ny fanamafisana ny fahefana amin'ny rafitry ny finday.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fitaovana amin'ny APP?
Raha te hamafa ilay fitaovana amin'ny fampiharana ianao ary hanampy azy indray dia ataovy toy izao manaraka izao:
1-Tsindrio ny fakan-tsary eo amin'ny pejy "Fakan-tsary" hidirana amin'ny pejy "Fikirakira".
2-Misy bokotra "Delete" eo ambany.
3-Tsindrio raha hamafa ilay fitaovana amin'ny kaonty.
Firy ny olona afaka miditra amin'ny kaontina iray miaraka?
Ny kaonty iray dia afaka miditra fotsiny amin'ny alàlan'ny telefaona iray sy solosaina iray miaraka amin'izay, ary ny olon-kafa dia tsy afaka mijery ny fakantsary fotsiny amin'ny alàlan'ny mekanisma fizarana.
Manitsy ny fahatsapana?
Azonao atao ny misafidy raha ahafahana mamantatra ny fihetsiketsehana / fanairana amin'ny alàlan'ny Settings-Alarm Settings, ary misafidy fahatsapana ambany / salantsalany / avo.
Hanova firaketana SD / firaketana rahona?
Mikasika ny fanontanianao dia izao ny valiny:
Tsindrio ny fakan-tsary tianao hojerena ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny hampidirana ny pejy topi-maso, kitiho ny tantara etsy ambany raha hisafidy ny filalaovana karatra SD / cloud playback.
Tsindrio ny bokotra etsy ambany, ary ampidino amin'ny alàlan'ny findainao mivantana ny Arenti App.
Na azonao atao ny misintona ny rindranasa Arenti ho an'ny telefaona iPhone na Android anao amin'ny alàlan'ny fikarohana ny teny fototra "Arenti" ao amin'ny App Store na Google Play na ny fitiliana ny kaody QR etsy ambany.
Mila mamela ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fampiharana "cloudedge" ianao handraisana hafatra fanao mahazatra. Rehefa misintona ilay rindrambaiko ianao ary miditra amin'ny fotoana voalohany, dia misy varavarankely pop-up hanosika anao hamela ilay fahazoan-dàlana. Raha misafidy ny hamono azy ianao dia mila mampiditra ny rafitry ny telefaona-fampandrenesana-mahita "cloudedge" ary manome alalana fampandrenesana.